HABABKA CUSUB EE AAN CAADIGA AHAYN EE QAJAARKA SII KORDHAYA - BEER CAGAARAN
Bannaanka uurjiifka badanaa waxay la yaabaan sida loo abuuro berry, dhirtii geedo, iyo khudradda aagga yar iyo waqti isku mid ah goosashada dalagga. Waxaan kuu soo bandhignaa habab xiiso leh. beerashada qajaarka.
Ma taqaanaa? Waddanka qajaarka caadiga ah waa gobollada tropical iyo subtropical ee Hindiya, cagta ee Himilooyinka, halkaas oo weli ku kora xaaladaha dabiiciga ah.
Sida loo koro qajaarka bacaha ama bacaha
Habkani waa mid sahlan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa bac ah ama boorso balaastig ah. Waa 120 litir. Xitaa bacda sonkorta. Waxa kale oo aad u baahan doontaa laba-mitir dhir alwaax ah, 30 m oo xadhig ah ama xarig kalluumeysi ah, tuubbo dherer saddex mitir ah (ballac - 30 cm), dhirta teendhada (10 xabbo), isku dar ah dhirta lagu beerayo qajaarka. Ka hor inta aadan beerin qajaarka bacaha, waxaad u baahan tahay inaad sameysid shaqo diyaar ah. Labo nin oo ciddiyaha ah waa in lagu qodaa dusha sare ee qoryaha alwaax. Waa lagama maarmaan in lagu xiro xadhig ama xarig kalluumeysi. Tuubo kasta oo godan ah, godadka dhowrka ah ayaa la qodaa dhererka dhererka oo dhan oo ah qaabka baaritaanka. Bacda ama bacda waa in lagu dhejiyaa goobaha aad dooratay oo aad ka buuxiso substrate dhoobo. Dhar alwaax ah ayaa la dhigayaa bartamaha boorsada, tubooyinka godadka lehna waxay ku dhegsan yihiin hareeraha. Labada qaybood ee baakidhka, waxaad u baahan tahay inaad ka gooyo mindi iyo geedo geedo ah. Bacda kasta waa inay ahaataa 3 geedo qajaar ah.
Tuubooyinka godadka leh ee godadka leh waxay kuugu adeegi doonaan biyo-biyood, taas oo ah, waxay noqon doonaan nidaam waraabka. Waxay ka buuxsameen biyo ama cunto dareere ah. Go'aami haddii aad u baahan tahay qajaarka waraabinta, waxaad ka dhigan kartaa sida dhulku ku yaal bacda. In kulaylka qajaarka u baahan tahay in la waraabiyo si joogto ah iyo maalin kasta. In xagaaga qaboobaha noqon doonaa ku filan hal mar toddobaadkii.
Taageerada qajaarka waa in la rakibaa marka ay bilaabaan inay kudoodaan anteenada koowaad. Taageeradu waxay noqonaysaa qoryaha loogu talagalay teendhada, kuwaas oo lagu rakibay bacda kasta. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad ku dhajiso hal dhamaystir oo khadka kalluumeysiga si aad u sarayso qaybta qoryaha alwaaxda, iyo dhinaca kale ujir. On ololka jilicsan iyo whips dabayl noqon doonaa. Faa'iidooyinka habkani waa kuwo badan, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in qajaarka bacaha ay dareemaan weyn, iyo beerto waxay u baahan tahay dadaal badan.
Faa'iidooyinka noocaan oo kale ah:
Goobta goobta lagu keydiyo.
Waxay ku habboon tahay in la goosho iyo daryeelka qajaarka.
Saliinnada hore u bislaadaan mar walba nadiif.
Biyaha dhulka ku sii socdo muddo dheer.
Qajaarka waxaa laga ilaaliyaa jiirka, dulinka iyo cudurada.
Dhulka waxaa mar walba buuxiya nafaqooyin.
Laakiin waxaa sidoo kale jira faa'iido darrada ah sida soo degitaanka:
Bilowga xilli-ciyaareedka waxaa jira dhibaatooyin la xiriira dhisidda sariiro qotoma.
Marka qulqulaya qajaarka iyo bacaha, cuduro fangas ah oo kala duwan ayaa horumariya.
Qalabka lagama maarmaanka u ah beeritaanka ma aha had iyo jeer gacanta.
Ma taqaanaa? Qajaar ayaa ka muuqday dhaqanka in ka badan 6 kun oo sano ka hor.
Sida loo koro qajaarka foosto
Mid ka mid ah siyaabaha ugu cusub ee abuurka qajaarka ayaa koraya khudradda foosto. Habkani waa midka ugu caansan oo ugu caansan ee ku dhex beero. Dhammaan waxaad ubaahantahay waa boor weyn oo leh godad. Haddii aanay ku jirin weelka, adiga ayaa sameeya. Dildilaacaas waxaa loo baahan yahay in lagu quudiyo hawada dhulka.
Foosto horay loo diyaariyey. Waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan 2/3 qashinka organic, kuwaas oo horey loogu qasay dhulka, iyo waraabiyo biyo. Lakabka ugu dambeeyay waa dhulka, kaas oo daboolaya lakab 10 cm Waxaan abuuri doonaa abuurka halkan. Bartamaha foostada waxaad u baahan tahay inaad ku qodo dhalada laba litir oo aan lahayn hoosta iyo gufka, qoorta. Iyada oo aad, waxaad ka dhigi doontaa qajaarka iyo codsan bacriminta dareere ah. Dusha sare ee foosto waa in lagu xiraa cuntada cuntada. Tani waxaa loo sameeyaa si loo abuuro saameyn koronto ah. Waad ku mahadsan tahay isaga, abuurku si dhakhso ah ayuu u daadi doonaa.
Kobcinta qajaarka ee weelasha noocan oo kale ah ayaa leh faa'iidooyin badan:
Kala-goynta goosashada iyo daryeelka.
Geedaha ha barafoobin, maadaama ay ka sarreeyaan dhulka.
Humus ka badan ayaa bixiya nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah qajaarka, iyo iyaga quudinta ma aha muhiim.
Marka sunta, Bacriminta organic organic soo saaro kulaylka, kaas oo hubiya koritaanka fiican ee qajaarka.
Xakamaynta iyo qajaarka qashinka ah uma baahna inay xidhaan.
Geedaha ma xanuusanaayo uma baahna daaweyn kiimiko leh daawooyinka iyo kiciyeyaasha.
Waxaa sidoo kale jira faa'iido darro ah sida soo degitaanka:
Mar kasta maahan foornooyinka saxda ah.
Waraabinta joogtada ah, sida geedi socodka Bacriminta dabiiciga ah waxay u baahan tahay qadar ballaadhan oo biyo ah.
Ma taqaanaa? In Kitaabka Quduuska ah, qajaar waxaa lagu sheegay sida khudradda Masaarida.
Sida loo koro qajaarka dhalooyinka caaga ah
Habkani wuxuu u oggol yahay inuu bannaanka u soo ururiyo tiro badan oo dalagyo ah. Sidoo kale, adigoo isticmaalaya dhalooyin caag ah, waxaad ku kori kartaa qajaarka guriga guriga balakoonka.
Waxaa jira siyaabo badan oo ay ku koraan qajaarka dhalooyinka caaga ah:
Beer tiir leh.
Koraaya qajaarka hore.
Doorashada dhaqaale ee qajaarka sii kordhaya ee dhalooyinka caaga ah.
Habka asalka ah ee sii kordhaya ee koobabka dhalooyinka caaga ah.
Habka sii kordhaya ee aan la isticmaalin isticmaalida warqadda musqusha.
Waxaan tixgelin doonaa dhammaan fursadaha, waxaadna dooran kartaa naftaada ugu habboon. Habka ugu horreeya wuxuu ku haboon yahay beer yar. Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan doontaa dhalooyin caag ah, dusha sare, dhulka iyo xejinta derbiga. Dhalooyinka caaga ah ee la jarjaray ayaa lagu dhejiyaa gidaar si ay derbiga ugu buuxsamaan. In khudradda beeray abuuray. Inta u dhaxeysa dhalooyinka ayaa fidi dhuxusha. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in ay dhalooyinka sii wado oo ayna ku dhicin dabaylaha xooggan. Iyada oo quudinta joogtada ah iyo waraabinta, beerashada tooska ah ee qajaarka waxay kuu keeni doonaan hadhuudh wanaagsan.
Wixii beeraha ee qajaarka hore isticmaalaya dhalooyin caag ah, diyaarinta abuur waa in marka hore la fuliyo. Iyada oo habboon ee habkan loo isticmaalo, bannaanka u goosan dhamaadka Juun. Midab ah oo aad ka giiri karto abuur qajaar waa in lagu qooyay diyaarinta si kicin koritaan. Seeds lama isla markiiba gelin, waxay yihiin pre-qoyaan xal of potassium permanganate for nus saac.
Bartamihii Abriil, waxaad u baahan tahay inaad sameysid calaamad sariirta ah, qodo oo biyo ku dar digada digada digaaga. Dhowr maalmood ka dib, xabbad litir oo ash ah ayaa lagu kala firdhay beerta, dhulkana waa la qodayaa. Bartamaha sariiraha waxaad u baahan tahay inaad sameysid qoto dheer oo ah 10 cm iyo width oo ku saabsan 30 cm. Meel fog oo ku saabsan 20 cm beerta aad u baahan tahay inaad ka dhisto godad yar oo ku shub xal xaraar ah ee daloolka potassium. Ceelashaasi waxay ku faafaan 3 abuur qajaar. Top of iyaga waxay u baahan yihiin inay ku rusheeyaan ciidda iyo caleemaha tamped. Markaa waxaad u baahan tahay in aad jarjartid dhalooyinka balaastigga ah kuna rid ceel kasta. Seeds waa inay gudaha ku jirtaa. Laga soo bilaabo korka kor ku xusan waxay la kulantaa lutrasil. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad soo dhigto arcadda oo waxaad ku riixdaa filimka. Iyadoo waraabinta saxda ah iyo dhar xidhashada toddobaadkii, caleemaha kowaad waxay u muuqdaan. Ka dib tan kaddib, waxaad u baahan tahay inaad furto kabaha dhalada oo ku shub biyo diirran dhulka hareeraheeda. Filimku wuxuu u baahan yahay in la furo. Ka dib marka ay u baxaan sprouts si aysan u sii dheereynin dhalada, waa la saaraa.
Qaabka dhaqaaluhu waa habka aan caadiga ahayn ee lagu kobciyo qajaarka, maxaa yeelay waxaa lagu kori karaa kharash yar oo dhaqaale. Si arrintan loo sameeyo waxaad u baahan doontaa qaabka aqalka dhirta lagu koriyo iyo xarigga. Waxay u fidaan qaabka birta ah ee aqalka dhirta lagu koriyo oo kor looxiyo. Inta lagu jiro aqalka dhirta lagu koriyo waxaad u baahan tahay inaad qodo godad iyo buuxiso digaag digaag. Xagga sare, qashinka waxaa lagu daboolay dhulka 10 cm, godad gacmeed ayaa laga sameeyaa, kaas oo markaa ka buuxsamaya biyo karkaraya.
Ka dib markii uu dhulku qaboobo, abuur waa la beeray. In dhalada caag ah waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid biyo karkaraya oo ku rid dhulka ku xigta abuurka lagu beeray. Markaas waxaad u baahan tahay dhalooyinka prikopat wax yar, oo dabooli dalagyada dusha sare ee filimkii hore. Caleemaha ugu horreeya waxay soo muuqan doonaan usbuuc gudahiis waxayna si dhakhso ah u koraan oo u xaaraanayaan xadhkaha.
Sariiraha qumman ee asalka ah waxaa laga heli karaa koobabka dhalooyinka caaga ah. Habkani waa mid ku habboon, sababtoo ah waxay ku habboon tahay in la daryeelo dhirta. Ka hor inta aadan beerin, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka. Meesha ay ka qodayaan god yar oo ah 70 cm qoto dheer kuna buuxi cawska. On top of ciidda ku waraabiyay biyo kulul iyo ku shubay isku dar ah ee dhulka. Markaas waxaad u baahan tahay inaad dalool yar u sameyso dhinacyada, kuwaas oo ka dhigaya ash iyo digada. Dhinac kasta waxaad u baahan tahay inaad ku darto labo caleemo koob oo leh godad hoose. Waxay ku sii qoto dheerayaan si ay udhawdaan finanku ka soo baxaan dhulka. Bacaha waxay ka caawiyaan xididada nafaqada iyo qoyaanka ka soo baxa ciidda.
Sariirta ka sarreysa waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto arc oo aad soo qaadato filinka. Waxaa la saaraa qeybta labaad ee bisha Juun. Dhinacyada geesaha sariiraha ayaa dhigaya laba-mitir oo qoryo alwaax ah. Laba xirmo oo dheer ayaa ku xiran iyaga. Mid waa inuu ahaadaa mid si toos ah u taagan, iyo kan kale ee ku dhegan xagasha. Waa inaad leedahay saddexagal midig. Laga soo bilaabo midba midka kale, xayndaab saddex xagal ah ayaa lagu taagay fogaan ah 35 cm, naqshaddani waa inay la mid tahay jaranjarada. Sida ugu dhakhsaha badan qajaarka u bilaabmaa curl, waxay ku xiran yihiin tallaabooyinka "jaranjarada". Tani waxay u oggolaanaysaa qajaarka inay soo baxaan dhinaca qoraxda. Nidaam la'aan aan la isticmaalin waraaqda musqusha waxay kuu ogolaaneysaa inaad kobciso qajaarka iyo khudaarta kale ee aqalkaaga ku yaala windowsill. Waxaad u baahan doontaa hoosta dhalada caag ah, filim caag ah, warqad musqusha iyo dhalada buufinta.
Filimku waa in la jarjaraa 15 sm oo ballac ah. Ku rid warqad musqusha oo xarig kasta kuqorayso oo biyo ku qoyso faleebada. Ku faafi abuurka sare ee masaafada dheer ee 2.5 cm midba midka kale. Waxay u baahan yihiin inay daboolaan warqadda musqusha iyo fiilo filim. Naqshadani waa mid si fiican loo duubay oo loo geliyey dhalada lafdhabarata.
Waa muhiim! Rijeetadu ma aha in ay ku taal hoose ee dhalada, laakiin dusha sare.
Qeybta hoose ee dhalada waxaad u baahan tahay inaad ku shubto biyaha ilaa dhererkeedu yahay 2.5 cm oo gashado xayawaanka daaqadda. Biyaha waa in la beddelaa si joogto ah si aysan u joogsanin. Toddobaadkii, caleemaha ugu horreeya waxay ku dhalan doonaan, iyo marka caleemaha ugu horeysa ay muuqdaan, geedo waxaa loo rogi karaa dhulka si furan. Isku duubka kahor intaan la furin, xarafka sare ayaa laga saaraa.
Kobcinta qajaarka ee dhalooyinka ayaa leh faa'iidooyin badan:
Tani waxay badbaadineysaa waraabinta, sababtoo ah biyaha ayaa ujeedkoodu yahay ujeedada loogu talagalay oo aan ku fidin dhammaan beerta.
Foornada dhalada waxay ka ilaalisaa xididdada qajaarka cudurada.
Booguhu ma faragelin horumarinta qajaarka.
Ma taqaanaa? Giriiggu wuxuu ku sawiray qajaarka frescoes ee dhismayaasha ugu da'da weyn, sida qajaarka raashinka bogsiiyay waxaa lagu taliyey Theophrastus iyo Dioscorides. Iyo sida Avicenna qoray, waxay si gaar ah faa'iido u leeyihiin ka hortagga cudurada ee caloosha iyo beerka, ka fiican sida kuwa kale u harraadey oo ay xummad u yareeyaan.
Qajaarada qajaarka ee teendhada ama hut
Fikirka xiga ee qajaarka sii kordhaya waa mid asal ah. Marka hore sariirta oo kale waxay la mid tahay sariir, ka dibna wuxuu xasuusiyaa buun yar. Abuurka Cucumber waxay u baahan yihiin in lagu beeray godadka ku yaal sariirta mitirka. Boogaha hoose ama qabatooyinka ayaa hoos udhacay meel kasta oo godad ah. Bartamaha sariirta ubaxa waxaad u baahan tahay inaad tuubo tuubo leh dherer ahaan 3 m si aad u qoto dheer 1 mitir. Dusha sare ee tuubbooyinka tuubbada waa in lagu dhejiyaa. Laga soo bilaabo iyaga ilaa qabsashada hoose waxay fidiyaan xadhig khafiif ah ama xadhig. Buirtani waa in lagu daboolaa filim daahir ah, kaas oo la saaro ka dib xilliga guga. Tani sida teendhada loogu talagalay qajaarka ma fududa in la sameeyo gacmahaaga, natiijada waxay noqon doontaa midho goosasho leh. Sidoo kale, waxay u adeegi doontaa sida quruxda fiican ee bogga oo dhan.
Tani waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Waxay noqonaysaa quruxda goobta.
Qajaaradu waxay ku jiraan xaalad aad u fiican, waxay ku habboon yihiin inay rujiyaan oo ayna u baahnayn in la dhaqo.
Hut wuxuu ku keydiyaa goobta.
Waxaa sidoo kale jira faa'iido darrada beeraha sida:
Waxay u baahan tahay qaar ka mid ah kharashyada dhaqaale ee lagu iibsado alaab dheeraad ah.
Kulanka dhismaha wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo dadaal.
Qajaarada qajaarka ah ee ku yaala trellis
Hababka caanka ah ee beerashada qajaar waxaa ka mid ah isticmaalka trellis ah. Habkani waa mid waxtar leh oo cadeeyay bannaanka u badan. Waxaan ku bilownaa abuurka abuurka sariiraha. Waa inay is barbardhigaan midba midka kale fogaan dhan 1.5 m, inta u dhexeysa 25 cm waa in la tagaa, sida ugu dhakhsaha badan qajaarka u koraayo 10 cm, waxay bilaabaan inay ku rakibaan trellis. Waxaa laga samayn karaa qoryo, bir ah ama isticmaalaya taayir iyo taayirro giraan. Qoryaha waxaa ka samaysan laanta jilicsan ama bareegyada vystugannyh. Waxay u egtahay derbi Swedish. Laga soo bilaabo xayawaanka waxay sameeyaan unugyo 15 cm ballaaran. Xayawaanku waa inay ahaadaan ugu yaraan 4 cm, tiirarka tiirsanna waa inuu yahay ugu yaraan 6 cm. Kadibna waxay ku xiran yihiin saldhigga baararka. Doorashadani waxay qurxin doontaa meel kasta.
Si aad u samaysato hal bir bir ah oo ka sameysan xoojin, waxaad u baahan tahay inaad laba tubo ku qodo dhulka labada dhinac ee sariirta (mid walbana waa 2 m dheer). Si qoto dheer loo dhejiyo waa qiyaastii 40 cm .. Si ay u taageeraan in si adag loo istaago dhulka, waa in dhulka lagu riixaa 20 cm oo leh rooki. Labada dhinac ee beerta waxay ku wadaan jeexjeexyada iyo fidinta xadhigga. Qaab dhismeedka noocan oo kale ah ayaa lagu daboolay asal ah si looga hortago dhoobo. Suunka waxaa sidoo kale laga sameyn karaa bam-gacmeedyo iyo daal. Hal dhinac oo taayirada ah ayaa la jaraa oo la dhigaa meesha duurka. Halkaas waxaad u baahan tahay inaad geliso laba iskutalaab. Waa inay noqdaan meel dibadda ah. Dusha masaasadan waa in laga buuxiyaa ciid ah oo daboolaa bacda gooyaa. Cidhifyada bacda ayaa lagu riixi karaa muraayadda. Iska yaree godadka boorsada iyo abuurka abuur. Kadibna waxaa lagu daboolaa agrofibre.
Waa muhiim! Inta lagu jiro waraabka ama dabacsan, agrofiber ayaa la qaadi karaa.
Sida ugu dhakhsaha badan qajaarka u koraan ilaa 30 cm, bacda iyo agrofibre ayaa laga saari karaa. Xaruntu waa inay ku rakibaan fareemo leh boorka gawaarida ee gawaarida. Laga soo bilaabo baska si isaga u soo jiido silig.
Habkani wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan:
Harvest waxay ku habboon tahay in la uruuriyo, qajaarkuna had iyo jeer nadiif ah oo qalalan.
Sariirta loogu talagalay qajaarka waxay ku taalaa meel bannaan oo leh hawo wanaagsan.
Sariiraha beerta waxaa had iyo jeer la siiyaa kulaylka iyo qoraxda.
Waxaa jira faa'iido daro:
Kharashka dhaqaale waxaa looga baahan yahay inuu soo iibsado mesh, kala-soocid, xayawaan iyo dhejisyo.
Waxay qaadataa dadaal badan oo jireed iyo wakhti lacag la'aan ah.
Qolooyinka waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u dabacsanaadaan.
Kobcinta qajaarka ku jirta filim madow
Khudaarta kordhay, oo ay ku jiraan qajaarka, filim madow waxay qaadan doonaan farxad badan waxayna keenaan hadhuudh wanaagsan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa filim caag madow, qashinka organic, laanta yar, ash, EM-diyaargarow, ciid iyo humus. In sida aqalka dhirta lagu koriyo, qajaarka ayaa koray geedo.
Sariiraha waxay u baahan yihiin inay hore u qodaan. Waa inay noqdaan 60 cm ballaaran. Bacriminta macdanta waxaa laga dalbadaa ciidda. Bartamaha sariiraha waxaad u baahan tahay inaad furrow u sameysid inaad waraabiso adoo adeegsanaya qadka. Sariir aan lahayn digada ma siin doonaan goosashada wanaagsan, sidaa daraadeed waxaa fiican in lagu daro wax kasta oo ka mid ah organic ku saabsan sariirta. Sariirta waxaa lagu daboolay filim leh width width 1 m. Laga soo bilaabo filimka bilowga sariirta waxaad u baahan tahay inaad ku rakibtid dhalo leh hoos ugu qoynta qoorta gudaha. Waxaad u baahan doontaa inaad waraabiso. Cidhifyada filimka ayaa lagu rusheeyey dhulka. On film waa in loo sameeyaa laba saf oo goynta crosswise. Waxa la waraabiyaa, marka biyaha la nuugo, hal abuur oo qajaar ah ayaa lagu beeray daloolkan ilaa qoto dheer oo ah 2 cm, markaas godadka waa in lagu daboolaa laba cantoobo oo dhulka ah. Qajaaradu waa inay noqdaan toddobaadkii hal mar. Si aad u hesho goosashada bilowga Abriil ama Maajo, waxaad u baahan tahay inaad sameysid dib-u-habayn, kaliya hagaajiso lakabka filimka korkiisa kore.
Faa'iidooyinka filimka madow waa sida soo socota:
Under filimka wuxuu abuuraa microclimate aad u fiican, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in la goosto hore.
Daloolada ha ku dhexdhicin beergooyska.
U kaydinta isticmaalka biyaha ee waraabinta dalagga.
Waxyaabaha bey'adda bey'ad u saaxiibtinimo waa koray
Ma taqaanaa? 27-kii July, Maalinta Caalamiga ah ee Cucumber ayaa la dabaaldegay, waxayna ahayd maalintii ugu horraysay ee lagu qabto Suzdal.
Hababkaasi waa kuwo asal ah oo aan caadi ahayn, laakiin waxay kaa caawin doonaan inaad ku kaydiso meel bannaan oo ku taal goobta oo aad hesho miro badan oo qajaarka ah.